Qarax ka dhacay Garoonka Buula Burde iyo saldhigga ciidanka Itoobiya ee Halgan oo la weeraray.
0 Monday June 22, 2020 - 13:06:54
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen weeraro lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda Federaalka.
0 Monday June 22, 2020 - 12:22:06
Mid kamida siyaasiyiinta kasoo jeeda dhulka NFD ee gummeysiga kujira kana mid ah dabadhilifyada caanka ka ah mandiqadad ayaa laga qaaday xil muhiim ahaa oo uu ka hayay dowladad Kenya.
0 Monday June 22, 2020 - 10:09:25
Dowladda Itoobiya ayaa markale ku dhawaaqday in ay udiyaar garoowday difaacashada biya xireenka weyn ee ay ka dhisayaso halka uu ka burqado Webiga Niil.
0 Monday June 22, 2020 - 10:08:54
Hoggaamiyaha maamulka Puntland oo khudbad u jeedinayay qaar kamid ah ciidamadiisa ayaa ugu yeeray magacyo aysan filanayn horeyna aan looga baran.
0 Monday June 22, 2020 - 08:23:46
Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump oo sabtidii lasoo dhaafay bilaabay ololihiisa doorashada ayaa fagaare weyn oo uu kula hadlayay kumanaan kamid ah taageerayaashiisa bahdil daran ugu geystay xukuumada Federaalka ee ka jirta Soomaaliya ee Washigton kala shaqeysa la dagaalanka waxa loogu argigixisada,…
Muxuu yahay calanka Soomaaliya Yaase sameeyay [Dhageyso Warbixin].
0 Monday June 22, 2020 - 07:52:46
Sanad walba marka lagaaro bisha May ayay maamullada Soomaaliya ka jira udabaal degaan maalin loo bixiyay maalinta Calanka Soomaaliya!
0 Sunday June 21, 2020 - 15:22:47
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo saaka aroortii hore ka dhacay deegaan katirsan gobolka Mudug ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Maleeshiyaad Mareykanku tababaray oo ku dhintay qarax ka dhacay Wanllaweyn.
0 Sunday June 21, 2020 - 12:30:15
Khasaare culus ayaa ciidamada dowladda Federaalka ee Mareykanku tababaray kasoo gaaray qarax xooggan oo lagula beegsaday mid kamdia degmooyinka ugu caansan Sh/hoose.
0 Sunday June 21, 2020 - 12:13:19
Hoggaamiyaha melleteriga wadanka Masar ayaa markii ugu horraysay sheegay in magaalooyin katirsan wadanka Liibiya ay qeyb ka yihiin amniga qaranka Masar.
0 Sunday June 21, 2020 - 10:53:39
Ugu yaraan sedax qof ayaa dhimatay tira kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii weerar Toorray loo adeegsaday uu ka dhacay magaalo kutaal wadanka Ingiriiska.
0 Sunday June 21, 2020 - 10:31:38
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro askar badan lagu dilay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan katirsan gobolka Sh/hoose.
Qorrax Madoobaad laga dareemay dalal ay Soomaaliya Kamid tahay.
0 Sunday June 21, 2020 - 10:11:58
Qorrax madoobaad ayaa laga dareemayaa wadamo ay Soomaaliya kamid tahay iyadoo si rasmi ah loogu baraarugay abaaro halkii saac ee subaxnimo.
0 Saturday June 20, 2020 - 19:29:36
Fagaare kuyaal degmada Galhareeri ee gobolka Galguduud waxaa maanta gelinkii dambe ka dhacay xukun dil ah oo lagu fuliyay nin basaas u ahaa sirdoonka dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Saturday June 20, 2020 - 11:26:19
Waxaa cirka iskusii shareeraya khilaafka udhaxeeya dowladaha Itoobiya iyo Masar ee ku aaddan biya xireenka laga dhisayo wabiga Niil oo ah midka ugu weyn caalamka.
0 Saturday June 20, 2020 - 10:36:57
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xaafado katirsan magaalada Muqdisho.
Al Shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhigga ciidanka Uganda ee Janaale.
0 Saturday June 20, 2020 - 10:01:06
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa weeraro xoogan ku qaaday askarta Shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan magaalada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu dhiig bixiyay Gedo iyo Baay.
0 Saturday June 20, 2020 - 09:41:01
Habqanka ciidamada Xabashida Itoobiya ee ku socdaalaya deegaanno katirsan gobollada Gedo iyo Baay ayaa wali lakulmaya weeraro dhabagal ah iyo qaraxyo khasaara lagu gaarsiiyay.
Rag Kufsi ka geystay degmada Galhareeri oo Maxkamad islaami ah ay xukun ku ridday.
0 Friday June 19, 2020 - 19:15:44
Maxkamad islaami ah oo kutaal gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa ridday xukun xaddu zina ah oo lagu fuliyay rag kufsi ugeystay gabar muslimad ah.
0 Friday June 19, 2020 - 10:57:10
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso.
0 Friday June 19, 2020 - 10:28:28
Kalimad maqal ah oo ay baahisay mu'asasada Al Andalus ee garabka warbaahineed ee Al Qaacidada Maqribul Islaami ayay ku xaqiijisay istish-haadka Sheekh Cabdi Maalik Droukdal oo caan ku ahaa magaca Abuu Muscab Cabdul Waduud.
Wasiir katirsan dowladda Itoobiya oo booqasho kedis ah ku yimid Muqdisho.
0 Thursday June 18, 2020 - 16:56:42
Mid kamida wasiirada dowladda Xabashida Itoobiya ayaa maanta si lama filaan ah kusoo gaaray magaalada Muqdisho ee ah caasimadda Soomaaliya.
Dalka Baraaziil oo noqday dalka labaad ee dhimashada ugu badan uu ka geystay Carona Virus.
0 Thursday June 18, 2020 - 16:55:42
Caabuqa Covid19 ayaa wali gummaad daran kawada wadanka Baraaziil ee dhaca qaaradda Laatiin America oo kamid ah meelaha ugu dhimashada badan Carona Virus.
0 Thursday June 18, 2020 - 07:42:08
Dagaalyahannada Al Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro ka fuliyay gobollo dhaca Bartamaha iyo bariga dalka Soomaaliya.
0 Thursday June 18, 2020 - 07:41:08
Dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ayaa sanaddii 2018 soo allifay wax ay ugu magac dareen isdhaxgalka dalalka geeska Afrika!
0 Thursday June 18, 2020 - 07:22:36
Golaha Odayaasha dhaqanka islaamiga beelaha Soomaaliyeed ayaa war kasoo saaray shirkii wadanka Jabuuti uga furmay Dowladda Federaalka iyo maamulka isku magacaabay Somaliland.
0 Thursday June 18, 2020 - 07:09:19
Dowladda dabadhilifka Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ay diyaar utahay dib usoo celinta cilaaqaadka kala dhaxeeya maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda ee xoogga ku qabsaday dhulalka muslimiinta Falasdiin.
0 Thursday June 18, 2020 - 06:37:56
Waxa loogu yeero Golaha ammaanka Q.Midoobay ayaa qaaday cod bixin lagu kala saarayo dowladaha Kenya iyo Jabuuti oo uu ka dhaxeeyay tartan ku aaddan ciddii ku fadhiisan laheyd kursiga xubinimada golaha ee qaaradda Afrika.
0 Wednesday June 17, 2020 - 19:59:14
Wararka ka imaanaya gobollada waqooyi galbeed dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dad ajaanib ah oo udhintay caabuqa Covid19 meydadkooda lagubay kadibna la aasay.
0 Wednesday June 17, 2020 - 19:39:41
Nin Si cajiib ah uga Badbaaday Xukun Qisaas Ah Oo Lagu Fulin Rabay!
0 Wednesday June 17, 2020 - 19:38:50
Maxkamadda ku dhaqanka Shareecada Islaamka ee wilaayada islaamiga ee Mudug ayaa ka laabatay xukun qisaas dil toogasho ah oo ay ku fulin rabtay qof gobolkaas ka geystay dil bareer ah.
Melleteriga Turkiga oo howlgal ka dhan ah PKK ka billaabay dalka Ciraaq.
0 Wednesday June 17, 2020 - 19:19:37
Kumanaan katirsan ciidamada melleteriga dowladda Turkiga ayaa gudaha ugalay wadanka Ciraaq halkaas oo ay uga jiraan dagaallo culus.
Qaraxyo gaadiid looga gubay ciidamo Mareykan iyo Bangaraaf ah oo ka dhacay Leego.
0 Wednesday June 17, 2020 - 11:19:07
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamo huwan ah kasoo gaaray weeraro cusub oo lagula beegsaday Koonfurta Soomaaliya.
0 Wednesday June 17, 2020 - 11:06:31
Labaatameeyo askari Hindiyiin ah ayaa dhintay tobanaan kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib dagaal culus oo ka qarxay xuduudda uu shiinuhu lawadaago wadanka Hindiya.
0 Tuesday June 16, 2020 - 13:13:19
Markale hay'adaha reergalbeedka ee sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka ayaa soo saaray warbixinno ay uga hadlayaan xasuuqa ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka geysanayaan dalka Soomaaliya.
0 Tuesday June 16, 2020 - 13:11:19
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil maanta qof shacab ah loogu geystay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho.